Nebukadneza Rọrọ Nrọ Gbasara Ndị Eze na Alaeze Dị Iche Iche | Ihe E Ji A Kụziri Ụmụaka Baịbụl
Alaeze nke Ga-adịru Mgbe Ebighị Ebi
E nwere otu abalị Eze Nebukadneza rọrọ nrọ na-atụ ụjọ. O mere ka ahụ́ ghara iru ya ala, meekwa ka ọ ghara ihi ụra. Ọ kpọrọ ndị na-emere ya anwansi, gwa ha, si: ‘Kọwaaranụ m nrọ m rọrọ.’ Ha gwara ya, sị: ‘Eze, gwa anyị ihe ị rọrọ ná nrọ.’ Nebukadneza sịrị ha: ‘Agaghị m agwa unu. Ọ bụ unu ga-agwa m ihe m rọrọ ná nrọ, ma ọ́ bụghị ya, m ga-egbu unu.’ Ha gwara ya ọzọ, sị: ‘Kọọrọ anyị nrọ gị, anyị ga-akọwara gị ihe ọ pụtara.’ Eze gwara ha, sị: ‘Unu na-achọ ịghọgbu m. Gwanụ m ihe m rọrọ ná nrọ.’ Ha gwara eze, sị: ‘E nweghị onye dị ndụ nwere ike ịkọwara gị nrọ gị. E nweghịkwa onye ga-emeli ihe a ị na-asị anyị mee.’
Ezigbo iwe were Nebukadneza, ya enye iwu ka e gbuo ndị amamihe niile nọ na Babịlọn. Ọ pụtara na a ga-egbukwa Daniel, Shedrak, Mishak, na Abednego. Daniel gwara eze ka o nyetụ ha oge. Ya na ndị enyi ya kpere ekpere, rịọ Jehova ka o nyere ha aka. Gịnị ka Jehova mere?
Jehova si n’ọhụụ gosi Daniel ihe Nebukadneza rọrọ ná nrọ ma kọwaara ya ihe ọ pụtara. N’echi ya, Daniel gwara onye na-ejere eze ozi, sị: ‘Unu egbukwala onye ọ bụla n’ime ndị amamihe. M nwere ike ịkọwa nrọ eze.’ Ọ kpọọrọ Daniel gaa n’ihu Nebukadneza. Daniel gwara eze, sị: ‘Chineke emeela ka ị mara ihe ga-eme n’ọdịnihu. Lekwa ihe ị rọrọ ná nrọ: Ị hụrụ otu nnukwu ihe a kpụrụ akpụ. E ji ọlaedo kpụọ isi ya, jiri ọlaọcha kpụọ obi ya na aka ya, jiri ọla kọpa kpụọ afọ ya na apata ụkwụ ya, ejikwa ígwè kpụọ ụkwụ ya ma jiri ígwè na ụrọ kpụọ ala ala ụkwụ ya. E si n’otu ugwu wapụta otu nkume, ya akụọ ihe ahụ a kpụrụ akpụ n’ala ala ụkwụ ya. Nkume a gweriri ihe ahụ a kpụrụ akpụ ya adịzie ka ntụ, ifufe eburu ya fesasịa. Nkume ahụ aghọọ nnukwu ugwu, jupụta ụwa niile.’
Daniel gwaziri eze, sị: ‘Lekwa ihe nrọ gị pụtara: Alaeze gị bụ isi ọlaedo ahụ. Ọlaọcha ahụ pụtara alaeze ga-achị ma ị chịchaa. A ga-enwekwa alaeze ọzọ ga-adị ka ọla kọpa, ọ ga-achịkwa ụwa niile. Alaeze nke ọzọ ga-achị ma ọ chịchaa ga-esi ike ka ígwè. N’ikpeazụ, a ga-enwe alaeze ọzọ nke ga-ekewa ekewa. Akụkụ ya ụfọdụ ga-esi ike ka ígwè, ụfọdụ agaghị esi ike otú ahụ ụrọ na-esighị ike. Nkume ahụ ghọrọ ugwu bụ Alaeze Chineke. Alaeze a ga-ebibi alaeze ndị a niile ma dịrị ruo mgbe ebighị ebi.’
Nebukadneza gburu ikpere n’ala ma kpudo ihu n’ala n’ihu Daniel. Ọ gwara Daniel, sị: ‘Ọ bụ Chineke gị mere ka ị mara nrọ a. O nweghị Chi dị ka ya.’ Nebukadneza egbughịzi Daniel. Kama, o mere ya onyeisi ndị amamihe ya niile na onye na-achị obodo niile ndị Babịlọn na-achị. Ị̀ hụla otú Jehova si zaa ekpere Daniel?
“Ha wee kpọkọta ha n’ebe a na-akpọ Ha-Magedọn n’asụsụ Hibru.”—Mkpughe 16:16
Ajụjụ: Olee ihe mere Daniel ji nwee ike ịkọwa nrọ Nebukadneza? Kọwaa ihe nrọ ahụ pụtara.
Alaeze E Ji Tụnyere Nnukwu Osisi
E ji nrọ ahụ Nebukadneza rọrọ gosi ihe ga-eme ya.
Ọ bụrụ na ị ma azịza ajụjụ a, ị̀ ga-ejili Baịbụl kọwaara ya mmadụ?